इंटेल हन्ट शोडाउन हैक 🥇 धोखा दिन्छ, एम्बोट, ईएसपी, वालह्याक - गेमप्रॉन
Intel शिकार: शोडाउन ह्याक
लुट र बदला बीचमा निर्णय गर्न थकित हुनुहुन्छ? इंटेल हन्टको साथ दुबै संसारको सब भन्दा राम्रो पाउनुहोस्: शोडाउन ह्याक!
हाम्रो शिकारमा पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्: १-दिनको लागि शोडाउन इंटेल ह्याक र हामी के प्रस्ताव गर्छौं हेर्नुहोस्।
यदि तपाइँलाई लाग्दछ कि तपाइँलाई धोखा दिदा पनि अधिक समय चाहिन्छ भने, तपाइँ जहिले पनि १ हप्ताको उत्पादन कुञ्जी खरीद गर्न सक्नुहुन्छ!
हाम्रो हन्ट: शोडाउन इंटेल ह्याक प्रयोग गर्नुहोस् जबसम्म तपाईं चाहानुहुन्छ! आज १ महिनाको उत्पादन कुञ्जी खरीद गर्नुहोस्।
हन्ट: शोडाउनले तपाईंलाई (र तपाईंको साथीहरू लागू भएको खण्डमा) धेरै तरीकाले परीक्षण गर्नेछ, किनकि यो केवल टोलीको विपक्षी होइन जुन तपाईं खोज्नु भएको थियो। दुबै राक्षस र अन्य खेलाडीहरू बिना कुनै चिन्ताका हाम्रो हन्ट प्रयोग गर्नुहोस्: शोडाउन ह्याक!
शिकार: शोडाउन इंटेल ह्याक जानकारी
हन्टमा फेला परेका सबै सबैभन्दा लोकप्रिय सुविधाहरूमा पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्: शो डाउनडन ह्याक यसै ठाउँमा गेमप्रोनमा! इंटेलमा आधारित मेशिनहरूमा प्रयोग गर्नको लागि विकसित, यो एक उपकरण हो जुन विन्डोज १० लाई समर्थन गर्दछ र अ English्ग्रेजीमा मात्र आउँदछ। जहाँसम्म यो HWID लक गरिएको छ, यो HWID स्पूफरको साथ आउँदछ अघिल्लो प्रतिबन्धहरूलाई वेवास्ता गर्न! यसले एक प्रमुख हन्ट प्रस्तुत गर्दछ: शोडाउन एइम्बोट, साथ साथै आईटम र एनिमी ईएसपीको रूपमा धेरै दृश्य ह्याकहरू। हड्डी प्राथमिकता, चिकनी Aiming, र एक समायोज्य FOV सर्कल, तपाईं पूर्ण रूपमा आफ्नो ह्याकि experience अनुभव अनुकूलन गर्न को लागी एक मौका जब गेमप्रोन संग काम गरीरहेको छ।
हाम्रो शिकार: शोडाउन इंटेल एम्बोटले तपाईंलाई उपकरणलाई धेरै तरिकाले कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ, तपाईंलाई तपाईंको धोखाधडीका तरीकाहरूलाई व्यक्तिगतकरण गर्न। ESP सुविधा फिल्टर आईटमहरू / खेलाडीहरू देखाउन फिल्टर गर्न सकिन्छ, जसले गेमप्रोन प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको लक्ष्यको बारेमा सजिलोसँग अझ बढी सिक्न अनुमति दिन्छ।
दुश्मन ईएसपी (अत्यधिक विन्यास, हड्डी)
दुश्मन जानकारी (मृत्यु जाँच, दूरी, ग्रुन्ट्स, हत्यारा, माकुरो, पानी शैतान, मीटहेड्स, इमोलोटरहरू, लीचेस, नरक शिकार, कसाई)
वस्तु ईएसपी (अत्यधिक कन्फिगर योग्य, भालु जाल, सुरा, आपूर्ति बक्स (बारूद, स्वास्थ्य, वस्तुहरू), हावा हतियार, फ्याक्न योग्य हतियार (बत्तीहरू आदि), विस्फोटनीय वस्तुहरू, शिकारी लूट, मर्ने घोडाहरू, चराहरू, पिंजरेहरूमा कुकुर, कोप्समा कुखुरा , हतियार क्रेट, आकर्षक, तेल, निकासी बिन्दुहरू।)
अत्यधिक कन्फिगर योग्य Aimbot
समायोज्य FOV र मानवीय स्मूथिंग
लक्ष्य हड्डी चयनकर्ता
बहु लक्ष्यकी कन्फिगरेसनहरू
हार्डवेयर इमुलेटेड माउस एयम्बोट (धेरै सुरक्षित!)
सबै पात्रहरू र NPC हरूमा काम गर्दछ!
कुनै स्प्रिड छैन (प्रतिशत स्लाइडरको साथ)
शिकारको बारेमा: शोडाउन इंटेल
गेमप्रोनले हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूलाई सम्भव भएसम्म भेट्न गइरहेको छ, जुन कुनै पनि योग्य ह्याक विकासकर्तासँग हुनुपर्ने एकमात्र लक्ष्य हो। हामीले यो सुनिश्चित गर्‍यौं कि यो धोखा प्रयोग गर्न सजिलो छ, यद्यपि यो सम्झन महत्वपूर्ण छ कि यो चिया आन्तरिक हो। तपाईं यो च्याट प्रयोग गरेको बखत स्ट्रिमिंगको बारेमा जान सक्नुहुनेछ, किनकि हामी स्ट्रिमप्रुफ विकल्प प्रदान गर्दछौं जसले तपाईंलाई हाम्रा उपकरणहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिँदछ कि तपाईंको दर्शकहरूलाई तपाईंले धोका दिँदै हुनुहुन्छ भनि नदिनुहोस्। यो तपाइँको फ्यान मनोरञ्जन राख्न उत्तम उपकरण हो, र यो पनि आदर्श हो जब तपाईं सामान्य भन्दा केहि बढी खेलहरू जित्न चाहानुहुन्छ।
हन्ट किन प्रयोग गर्दछ: अन्य प्रदायकहरूमाथि शटडाउन इन्टेल?
तपाईं अरूमाथि यो उपकरणलाई मनपर्ने कारण सरल छ, किनकि यो हातमा क्वालिटीको रूपमा आउँछ भने यसले अधिक धेरै प्रदान गर्दछ। तपाईं सम्भावित उपकरणहरू प्रयोग गर्न प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ जुनसँग काम गर्न सुविधाहरूको प्रशस्तता छैन, तर त्यो गेमप्रोनको साथ कहिले पनि कुनै मुद्दा होईन। तथ्य यो छ कि तपाईंले Intel- आधारित मेशीन प्रयोग गरिरहनु भएको पनि यसको मतलब यो हो कि तपाईंलाई एक मिल्दो आवश्यक छ, र धन्यबाद, तपाईंले फेला पार्नुभयो। त्यो मात्र हो, तर हाम्रो ग्राहक समर्थन पनि बेजोड छ! HWID स्पूफर उपकरणको साथ पनि सामेल गरिएको छ, त्यसैले कुनै पनि प्रतिबन्धको बारेमा चिन्ता लिनु आवश्यक पर्दैन जुन तपाईंले भूतकालमा खेल्नु भएको गेमप्रोनसँग प्रतिस्पर्धा गरिएको छ!
एक योग्य इन-खेल मेनू बिना, त्यहाँ यो धेरै नै गर्न सक्नुहुन्न जब यो चीटिंगमा आउँदछ। तपाईंले धेरै जसो परिस्थितिहरूमा फ्लाईमा समायोजनहरू आवश्यक पर्दछ, र त्यसैले गर्दा हाम्रो इन-गेम मेनू विचार गर्न त्यस्तो महत्त्वपूर्ण फिचर हो। यो बिना, तपाईं एक जीत स्थिति मा राख्नको लागि आवश्यक परिवर्तन गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। तपाईंले केवल शिकार लोड गर्नु पर्दैन: शोडाउन इंटेल ह्याक र प्रार्थना गर्नुहोस् कि बेस सेटिंग्स तपाईंको लागि काम गर्दछ! गेमप्रोन प्रयोग गरेर तपाईं आफ्नो सबै मनपर्ने खेलहरूको लागि नवीन (र प्रभावी) धोखा दिईएको संसारमा माया गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंले कति लामो समयदेखि धोखा गर्दै हुनुहुन्छ।
यद्यपि तपाईको सीपहरू प्राकृतिक रूपमा नैन्न पार्ने तरिकाहरू छन्, इंटेल हन्टको प्रयोग गरेर: शटडाउन विचार गर्न सब भन्दा सजिलो विकल्प हो जब यो अहिल्यै जित्ने कुरा आउँछ। तपाईंले अब अन्य खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन, एकचोटि तपाईंले यो उपकरण सक्षम गरे पछि, म्याच समाप्त भइसकेको छ।
गर्न तयार प्रभुत्व जमाउनु हाम्रो शिकारको साथ: शोडाउन इंटेल हैक?